Ny kinova fahatsiarovana roa an'ny OnePlus 7 Pro dia tsy amidy intsony any Etazonia | Androidsis
Mazava kokoa noho izany fa Etazonia dia iray amin'ireo firenena izay misy fiovana bebe kokoa amin'ny varotra sy fividianana an'izao tontolo izao. OnePlus dia mihevitra izany ary, na dia manana vondron'olona mpampiasa manan-danja aza izy ary, ankoatr'izany, ireo mpankafy ao amin'io faritany io, dia nesoriny ny maodelin'olon-droa amin'izao fotoana izao amin'ny tranokalan'ny ofisialiny.
El OnePlus 7 Pro Izy io dia terminal avo lenta avo lenta navoakan'ny orinasa sinoa tamin'ny tapaky ny volana Mey tamin'ity taona ity miaraka amin'ny OnePlus 7. Tany Etazonia dia natolotra tamin'ny voninahiny rehetra izy io, fa ankehitriny ny kinova RAM 6 GB misy habaka fitehirizana anatiny 128 GB sy RAM 12 GB misy 256 GB ROM dia tsy amidy intsony eo amin'ny sehatra anaovany.
Hatramin'izao, ny hany fiovana ao amin'ny OnePlus 7 Pro izay azo vidiana amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialin'ny mpanamboatra dia ny RAM 8 GB misy habaka fitehirizana anatiny 256 GB. Mahaliana izany ary mahatonga antsika hanontany tena ny antony nanesorana ireo kinova hafa tsy ho tadidy. Azo inoana fa te hanapaka ny katalaoginy ao amin'io firenena io ny orinasa mba hampirisihana ny mpampiasa hividy ny sasany amin'ireo maodely vaovao an'ny OnePlus 7T y 7T Pro.
Ny maodely RAM 6GB an'ny OnePlus 7 Pro dia natomboka tany Etazonia tamin'ny $ 669, raha toa kosa ny kinova RAM 8GB sy 12GB dia nanjary ofisialy niaraka tamin'ny $ 699 sy $ 749. Ankehitriny, miaraka amin'ny modely fototra sy ambony, ny variant RAM 8GB dia amidy amina $ 649 eo ho eo amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny orinasa. Ny fihenan'ny vidiny dia kely indrindra, saingy mbola ankasitrahana ihany, fa tsy ny zava-misy fa tsy misy intsony ireo andiany roa hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » OnePlus dia tsy manohy manolotra karazany roa amin'ny OnePlus 7 Pro amin'ny iray amin'ireo tsena lehibe indrindra eran-tany